Helminthiasis मात्र होइन स्तनधारी तर पनि चरा ग्रस्त हुन सक्छ। को चिकन मा एक अप्रिय रोग, उदाहरणका लागि, यो एकदम अक्सर हुन्छ छ। क्षति कुखुरा फारमहरु helminthiasis साँच्चै Colossal लागू गर्न सकिन्छ। किन यस्तो रोग को रोकथाम र आफ्नो समसामयिक उपचार गर्न त महत्त्वपूर्ण छ भन्ने छ।
के हुन् कुखुरा मा कीडे सबै भन्दा साधारण हो
प्रकृतिका Helminth प्रजाति, एक ठूलो रकम छ। आर्थिक चरा roundworms दुवै, परजीवी, र टेप वा flukes संक्रमित गर्न सकिन्छ। विभिन्न अङ्गहरू मा सक्छन् कुखुरा प्रत्यक्ष कीडे। तर अक्सर यो आर्थिक चरा सबै nematodes Ascaris परिहाल्छ। hens वा broiler बिछाउने को intestines हालका बस्ती बसाना।
धेरै गम्भीर जटिलताहरू, स्तनधारी विपरीत, कुखुरा मा कीडे सामान्यतया कारण छैन। तर स्वास्थ्य गर्न क्षति, तिनीहरू अझै पनि महत्वपूर्ण कारण हुन सक्छ। अक्सर, को कीडे जवान कुखुरा संक्रमित। helminthiasis को पहिलो संकेत मा उनि एकदम उच्चारण देखिन्छन्। तर यदि घर को मालिक भविष्यमा रोग मा उपयुक्त कारबाही भएन लगभग asymptomatic फारम मा जान सक्नुहुन्छ। र, फलस्वरूप, कुखुरा उत्पादकत्व ड्रप को कारण कठिन हुनेछ निर्धारण गर्न।
रोग को जोखिम
जो चिकन कीडे को शरीर मा बसे पनि बर्ड नै तिनीहरूलाई लिएर पोषक को भारी मात्रा, अवशोषित गर्न सुरु गर्नुहोस्। यो broiler वा बिछाउने कुखुरी को फलस्वरूप वजन गर्न सुरु र एकदम उत्पादकत्व संकेतक कम गर्छ।
अर्को खतरा कुखुरा नशा मा helminthiasis छ। जीवन कीडे को प्रक्रिया मा विभिन्न हानिकारक पदार्थ को बस भारी नम्बर बरामद। तीव्र गतिमा हाल लगभग पूर्ण चरा को रगत अवशोषित। यस पालो गरिब स्वास्थ्य, कमजोरी तिर जान्छ, र प्रतिरक्षा घट्यो। फलस्वरूप, यस चिकन बोट भन्दा कुनै पनि थप गम्भीर संक्रमण टिप्न गर्न सक्नुहुन्छ।
शरीर मा कुखुरा प्रत्यक्ष कीडे, रूपमा पहिले नै आन्द्रा सबैभन्दा अक्सर उल्लेख। तर कहिले काँही परजीवी को लार्वा अन्य अङ्गहरू, र अन्डा मा भित्र पस्नु। त्यसैले कुखुरा बोट को होस्टहरूको लागि सहित खतरा संग fraught छ। Nematodes जनावर को intestines र मात्र चरा जीवन बिताउन सक्छन्, तर पनि, को पाठ्यक्रम, मानिसहरूलाई।
कुखुरा मा helminthiasis को सबैभन्दा खराब नतिजा एक आंत्र बिच्छेद छ। यो कीडे को गहन प्रजनन मा हुन्छ। यस मामला मा लार्वा त घनी आफ्नो पर्खाल बस खडा गर्न सक्दैन भन्ने intestines भर्न छ। यस मामला मा, रोगग्रस्त चिकन मर्छ।
रोग बोट वास्तवमा धेरै संक्रामक छ। बथानलाई कम्तिमा एक चिकन संक्रमित छ भने, केही समय farmstead चरा सबै जीवित व्यवहार हुनेछ। Helminth अन्डा फिड मार्फत वा पानी मार्फत या त हस्तान्तरण छन्। अक्सर, कुखुरा को संक्रमण को स्रोतहरु helminthiasis अर्थव्यवस्था को मामला मा विपन्न छन्। तसर्थ, जवान जनावर वा कुखुरा उत्पादकहरु मालिक खरीद हुँदा ध्यान दिएर हुनुपर्छ।
एउटै फीड लागू हुन्छ। मात्र राम्रो प्रतिष्ठा संग विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता देखि लायक hens लागि अन्न, चोकर, र मूल तरकारी किन्न।
यस कुखुरा कीडे कि निर्धारण, तस्वीर। यो संक्रमित भएपछि चरा भोक हराउछ र तीव्र गतिमा वजन गर्न थाल्छ। साथै, helminthiasis को लक्षण हो:
उत्पादकत्व मा कमी;
नरम-shelled अन्डा को उपस्थिति;
पखाला (मल पहेंलो);
फिक्का रंग शिखा;
यस मलको मा लार्वा उपस्थिति;
कुखुरा मा कीडे विभिन्न प्रकारका छन्। तर कहिले काँही यो रोग को लक्षण पनि उच्चारण छैन भनेर हुन्छ। यस मामला मा, मालिकको ठेगाना गर्नुपर्छ, परस्पर Alia, र पशु चिकित्सकहरु मदतको लागि। यो रोग को निदान को लागि अभिप्रेरित उपकरण, जस्तै प्रत्येक क्लिनिक मा छ। सही ढंगमा चरा को शरीर मा कीडे को उपस्थिति निर्धारण गर्ने क्रममा, डाक्टर बस फोहर फाल्न को एक नमूना ल्याउन। यस मामला मा, यो सही आंतों कीडे निदान मात्र होइन, तर दूषण परजीवी कस्तो कारण छ पनि सिक्न र, फलस्वरूप, सबै भन्दा प्रभावकारी उपचार निर्दिष्ट गर्न सम्भव हुनेछ।
के निवारक उपाय लग्नु गर्नुपर्छ
कुखुरा मा कीडे लक्षण धेरै अप्रिय हुन सक्छ। वास्तवमा सामान्यतया खेत गर्न धेरै क्षति गराउँछ मा रोग हो। निस्सन्देह, कुनै पनि संक्रमण उपचार गर्न भन्दा रोक्न सजिलो छ। यो सन्दर्भमा, को पाठ्यक्रम र helminthiasis संग। फारमहरु मा रोग को रोकन उद्देश्य रोकथामका उपाय अनिवार्य गर्नुपर्छ।
पहिले नै उल्लेख रूपमा, कुखुरा घर मा भाइरस को सबै भन्दा विपन्न परिवारमा देखि प्रविष्ट छ। त्यसैले थप जवान खरिद वा निर्माताहरु संगरोध कम्तीमा दुई हप्ता पकड हुनुपर्छ। यो समय समयमा चरा helminthiasis वा अन्य कुनै पनि रोग को कुनै संकेत देखाएका छन् भने, यो एक साधारण घरमा रूपान्तरित गर्न सकिन्छ। रोकथाम लागि भनेर खुवाउनुभयो आवश्यक worming दबाइ अघि जवान जनावर।
किनभने घरमा स्वास्थ्य नियमहरु संग banal गैर-अनुपालन को बोट को hens र broiler भागहरु बिछाउने मा कीडे। यो किनमेल चरा घर छ जो बच्चाहरु, सफा रूपमा ध्यान दिएर सकेसम्म हुनुपर्छ। यो समय देखि पैदल समय र aviary सफाई हुनुपर्छ। धेरै अनुभवी किसान रूपमा, कीडे अक्सर संक्रमित कुखुरा मुक्त-सीमा समावेश हुन्छन्।
कुखुरा कीडे को संक्रमण पनि antiparasitic लागूपदार्थ प्रयोग गर्नुपर्छ रोक्न। तिनीहरूलाई लगभग एक पटक हरेक महिना को रोकथाम लागि बर्ड दिनुहोस्।
लागूपदार्थ संग उपचार
कीडे एक चिकन - को पाठ्यक्रम, धेरै अप्रिय र एकदम खतरनाक रोग। तर, यो उपचार छ वास्तवमा अपेक्षाकृत सजिलो छ। लागूपदार्थ नियमित फार्मेसी मा हुन सक्छ, र पशु वा एक स्टोरमा worming को चरा रही लागि आवश्यक प्राप्त गर्नुहोस्।
यो सिधै चरा कीडे सबै प्रकारका उपचार को लागि अभिप्रेरित एक चिकित्सा खरिद गर्न सबै भन्दा राम्रो छ। बजार मा यी औषधिहरू, धेरै आज छन्। तिनीहरूलाई को भन्दा प्रभावकारी कीडे छन्। तर, यस्तो लागूपदार्थ खरीद हुँदा ध्यान दिएर हुनुपर्छ। बजार मा अक्सर, नक्कली फेला कुनै पनि राम्रो चराहरूले गर्न शरीर ल्याउन छैन। कहिलेकाहीं यस्तो सुविधा हानि गर्न सक्छ र पनि विषाक्त अन्डा वा कुखुरा बनाउन।
उदाहरणको रूपमा, एकदम राम्रो दबाइ राम्रो कुखुरा मा कीडे देखि मदत "Pyrantel" हुन सक्छ। यस झोलुङ्गे कीडे बस hens खाना थपियो को उपचार को लागि हो। प्याकेज मा निर्माता "Pyrantel" द्वारा निर्दिष्ट चरा विभिन्न प्रजाति लागि विशिष्ट औषधिको खुराक। यस दबाइ संग उपचार6दिन को अंतराल मा तीन पटक बाहिर छ।
निजी परिवारमा थुप्रै मालिक यदि कीडे कुखुरा फेला पर्यो, कुखुरा छ यो सम्भव छ छक्क परे? निस्सन्देह, दूषित कुखुरा मासु मानव खपत मा इन्कार छ। कुखुरा पहिलो व्यवहार राम्रो हुनुपर्छ। पछि anthelmintics कुखुरा को आवेदन लगभग दुई महिनाको लागि त्यहाँ सिफारिस गरिएको छैन।
कुखुरा मा कीडे: उपचार लोक विधिहरू
धेरै राम्रो helminthiasis लाभ उठाउन भनेर लागूऔषधको विभिन्न प्रकार। तर, साधन अझै पनि रासायनिक र नकारात्मक प्रभाव सहित चरा शरीर भएको सक्षम छ। तसर्थ, उपनगरीय क्षेत्रमा धेरै मालिकहरूले आफ्नो कुखुरा कीडे, परम्परागत विधिहरू संक्रमित उपचार गर्न रुचाउँदैनन्। यस मामला मा, सबै भन्दा सामान्यतः औषधीय जडीबुटी प्रयोग। धेरै राम्रो worming hens उदाहरणका लागि, हरियो प्याज कटा, मद्दत गर्छ। यो ठूलो संख्या प्रत्येक रुचाउने मा Mash थपियो गर्नुपर्छ।
पनि पाइन सुई वा FIR को पानी decoction तिनीहरूलाई सट्टा भेटी, सकेसम्म कुखुरा मा कीडे को छुटकारा प्राप्त। अक्सर helminthiasis आर्थिक र चरा कद्दू बीउ, जामुन, cranberries र लसुन प्रयोग बाट।
कुखुरा परम्परागत विधिहरू मा आंतों कीडे व्यवहार गर्न निर्णय, यो यस्तो विधि मात्र संक्रमण को प्रारम्भिक चरणमा उपयुक्त छ भनेर मनमा सार्ने गर्नुपर्छ। कुखुरा र धेरै मा helminths पहिले नै सारा बथानलाई संक्रमित भने, यो एक व्यावसायिक तयारी प्रयोग गर्न राम्रो अझै पनि छ।
को एबीसी माली गर्दा पिन्च खीरे?
तपाईं चिकन अन्डा प्वाल गर्न कति दिन थाहा छ?
छिनो - जोताइ लागि मशीनरी
गरेको रोपेर कहिले जाडो लसुन बाहिर आंकडा प्रयास गरौं
अन्न seeder पहिले नै Sumerians छ
खुला क्षेत्रको टमाटर को सबै भन्दा राम्रो प्रजातिहरू। खुला क्षेत्रको टमाटर को लोकप्रिय किसिमहरु
कागजात मा संकल्प: नमूना उदाहरण
स्तन क्यान्सर: लक्षण र रोकथाम विधि
एक मातृभूमि के हो? शब्द "मातृभूमि" को अर्थ र मूल
नुस्खा पखेटा घरमा बारबेक्यु
रातो सेना अधिकारी अलेक्जेन्डर Pechersky: जीवनी। Aleksandra Pecherskogo कमाल: Sobibor मा एक विद्रोह
फाराम सिर्जना: प्रश्न र प्रतिक्रिया विकल्प चयन
Meditonzin: प्रयोगका लागि निर्देशनहरू, वर्णन, एनालॉगहरू, समीक्षाहरू
कुन पछाडि पछाडि राख्नु हुन्छ जब बेकिंग र खाना भण्डारण गर्न प्रयोग गरिन्छ।
ल्याप्टप लेनोभो Z570 मा थर्मल पेस्ट प्रतिस्थापन: निर्देशन